Asia " Journey-Assist - Ireo firenena Azia. Attractions.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia
Azia amin'ny planeta planeta
Azia no ampahany lehibe indrindra eto an-tany, na eo amin'ny sehatry ny mponina sy ny jeografika. Maherin'ny 43 tapitrisa kilometatra toradroa ny velarantany. Manodidina ny 4.5 lavitrisa ny mponina ary maherin'ny 60% -n'ny mponina eran'izao tontolo izao izany. Ary Asia izao no faritra fampandrosoana lehibe indrindra eto an-tany. Ahitana fanjakana 54 i Asia. Mitsingevana ny isa, satria misy firenena 5 tsy ekena, na amina ampahany ihany. Ary misy firenena maro any amin'ny faritany ara-jeografika any Azia sy Eropa (Kazakhstan, Russia, Georgia, Turkey, Azerbaijan) .Ny firenena sasany dia hita any amin'ny faritra ara-jeografika any Azia sy Eropa (Russia, Kazakhstan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, ary Turkey). Faritra any Azia - Azia Afovoany; Azia atsimo Azia Atsimo Atsinanana; Moyen Orient
Ny habetsaky ny faritra marim-pototra, ny endri-tsakafo, ny habetsahan'ny rotsakorana any Azia, dia misy fiantraikany amin'ny fahasamihafana ny flora sy ny biby. Trano biby mahatalanjona maro izy io. Ny ankamaroan'izy ireo dia miavaka ary tsy hita afa-tsy any Azia. Ny tontolon'ny rano dia mahagaga ihany koa amin'ny fahasamihafana isan-karazany. Ny vorona, ny zavamaniry, izany rehetra izany dia karazany maro sy betsaka araka izay azo atao! Mazava ho azy fa tena mahaliana sy samihafa ny zavamaniry sy ny flora amin'ireo ala tropikaly any Azia Atsimo Atsinanana sy Atsimo. Mazava ho azy, biby ampy sy mampidi-doza. Mampalahelo fa sarotra ho an'ny fiainana ny biby sy ny zavamaniry any Azia ny mieritreritra fa io no faritra mandroso indrindra eto an-tany. Eo ambanin'ny orinasa indostrialy sy ny tanàn-dehibe dia alaina ny ala, ny ala sy ny renirano mikoriana. Ary maro karazana biby sy zavamaniry ankehitriny efa eo amin'ny fandringanana izao.
Ny ankamaroan'ireo loharanom-baovao dia manaiky fa ny anarana hoe Azia dia nampiasaina hatramin'ny taona 440 talohan'i Kristy. ary avy amin'ny teny grika taloha Aoia. Ao amin'ny epic grika, ny an'ity an'izao tontolo izao dia avy amin'ny anaran'i Assiya, izay an'i nymph, vadin'ny Prometheus.
Ranomasimbe telo i Azia - ny Arctic (avaratra), India (atsimo) ary Pasifika (atsinanana). Any andrefany, eo amin'ny sisin-tany miaraka amin'i Eropa, mamakivaky ny kaontinanta aty anaty tany (Black, Azov, Marmara, Mediterranean ary Aegean) dia mifandray amin'ny Ranomasimbe Atlantika. Misy faritra midadasika amin'ny fidirana anatiny - ny Caspian sy ny Aral Seas, farihy Balkhash, Baikal (misy 20% ny tahirin-dranon'ny rano eran-tany). Avy any Amerika Avaratra, tafasaraka amin'ny Ranomasina Bering i Asia. Ny Ranomasina Mena sy ny Suez Isthmus dia mampiavaka an'i Azia amin'i Afrika.
Sazy penina lehibe an'i Azia
Saikinosy Arabo, Hindustan, Semenanjung Koreana, Chukotka, Kamchatka, Taimyr, Azia Minor.
Ny Nosy lehibe sy ny Archipelagos
Sri Lanka, Filipina, Sakhalin, Hainan, Sipra (fanjakan'i Eropa, fa ao amin'ny faritra ara-jeografika tanteraka any Azia), Big Sunda, Taiwan, Vondronosy Malay, Nosy Islands, Archipelago japoney, Nosy Novosibirsk.
hihy efitra tany Atsinanana-Afovoany, miainga avy any Yemen ka hatrany amin'ny Hoala Persiana, ary hatrany Oman ka hatrany Irak sy Jordana. Gobi Desert - ny tany efitra lehibe indrindra any Azia (1 300 km km). Miitatra avy any Chine ka hatrany Mongolia. tany efitra Karakum. Mirefy 350 arivo km ny velarantany. Any amoron'ny Ranomasina Caspian no misy azy ary manakaiky ny 70% any Turkmenistan. tany efitra Takla Makan. Miorina 337 arivo kilometatra toradroa. Io no toeram-pasika fasika lehibe indrindra eto an-tany. Aseho tanteraka any Chine. tany efitra Kyzyl Kum. Mahatratra 300 XNUMX km ny velon-trano. Tao anelanelan'i Kazakhstan sy Uzbekistan. tany efitra Tar. Mihoatra ny 200 arivo kilometatra ny velarana. Io no hany tany efitra tany subtropika. Any Pakistan sy India no misy azy.
Avaratra sy Avaratra-Atsinanana - Ob, Irtysh (mpiambina ny Ob), Yenisei, Angara (lehiben'ny Yenisei), Lena, Kolyma, Indigirka, Khatanga; Atsinanana - Yangtze; Atsinanana - Renirano mavo; Atsimo - Mekong, Saluin, Irrawaddy, Ganges, Brahmaputra (mpampitondra ny Gangga); Atsimo Andrefana - Indus, Tiger, Euphrates, Amu Darya, Syr Darya. Ny renirano lava indrindra any Azia dia ny Yanzsi (araka ny loharanom-baovao maro samihafa dia ny 5800 sy 6300 km) ny halavany.
Ny fototry ny Azia dia sehatra lehibe efatra - Arabo, Indianina, Sinoa ary Siberia. Tontoloko telo amin'ny ampahan'ity tontolo ity no anjakan'ny tendrombohitra sy plateaus. Ny famonosana an'i Azia dia tanànan'ny tendrombohitra sy ny lembalemba. Any atsimo - ny Pamirs, plateau Tibetan, Himalaya, Kush Hindu. Any Avaratra, ny lemaka afovoany Siberia, Chersky Ridge, Stanovoye Highlands, Ridge Verkhoyansk, tendrombohitra Altai, Ridge Middle. Ny atsinanana dia notazonin'ny Khingan Big sy Kely, Sitohe-Alin. Any andrefana - Caucasus sy ny tendrombohitra Ural.
Jeografia aziatika amin'ny isa
Faritra - 43 475 km2 (anisan'izany ny nosy, izay 2001 2 km8848). Ny haavon'ny faran'ny avo indrindra, ny Mount Jomolumgma (Everest) - 405m. (avo indrindra eran'izao tontolo izao) Ny haavon'ny ambany indrindra, ny haavon'ny Ranomasina Maty - minus 77m. Ny haavon'ny farany indrindra dia Cape Chelyuskin (43 ° 104 ′ N ary 18 ° 1 ′ E) Ny farany atsimo dia Cape Piai (16 ° 103 ′ N ary 30 ° 39 ′ E) Ny tena mampisahy indrindra dia Cape Baba (29 ° 26 ′ N ary 04 ° 66 ′ E) Ny faritry ny atsinanana dia Cape Baba (05 ° 169 ′ N ary 40 ° XNUMX ′ E)
Azia no kaontinanta misy tara-pahazavana amin'ny masoandro indrindra eto an-tany. Any Arabia, mahatratra 220 kcal / sq. jereo Ny fizarana ny rivotra manana vanim-potoana tononina. Misy fivezivezena amin'ny mononta any Azia. Amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina dia mihoatra ny antsasaky ny kaontinanta no mibodo ny anticyclone Siberia, miaraka afovoany ao Mongolia. Ny rivotra kontinanta dia mikoriana manaraka ny ilany atsinanan'ity anticyclone ity mankany amin'ny lalana atsimo. Monona amin'ny ririnina ity manomboka amin'ny Novambra ka hatramin'ny Martsa. Miova ny làlan-kalehan'ny diany mankany atsimo: any amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Japon, Korea, Sina, ity vector ity dia avaratra andrefana, any amin'ny faritra atsimo atsinanan'i Sina ary any amin'ny faritra avaratry Vietnam dia misy ny lalana avaratra atsinanan'ny mononta. Mampiavaka an'i Azia atsimo ny fitarihan'ny ririnina avy any avaratra atsinanana. Eto izy io dia miaraka amin'ny fivezivezin'ny rivotra. Ny fitarihan'ny rivotra mitovy amin'izany dia mampiavaka an'i Azia Andrefana Andrefana.
Ny isothermo farany ambany amin'ny volana Janoary dia ao amin'ny faritany izay nanjakan'i Siberia anticyclone. Ny toetrandro mando miaraka amin'ny ranomandry dia manjaka eto, izay mandray anjara amin'ny fametavetana ny tany, noho ny fipetrahana any amin'ny faritra avaratr'i Chine sy Mongolia. Any atsimo dia misy ny fitomboan'ny hafanana amin'ny ririnina, na izany aza, mijanona ho havana kely amin'ireo faritra hafa eto ambonin'ny tany izy ireo. Ao amin'ny faritanin'i Azia Atsimo Atsinanana, mitambatra ny fivarotana ririnina ary ny rivotra ara-barotra avaratra atsinanana. Vokatr'izany dia tonga any amin'ny morontsiraka atsinanan'i Indochina ny orana. Amin'ny ririnina, ny isotherms avo (hatramin'ny +20) dia mahazatra ho an'ny Azia Atsimo. Fa ny Hindustan kosa, izay mihantona amin'ny ilany avaratry ny Himalaya, dia mafana kokoa noho i Indochina. Isotherm +20 any India dia manaraka ny tropika, izay any avaratra. Any amin'ny nosy Malay, ny isotherfi dia ririnina +25.
Any amin'ny ankamaroan'ny Azia, ny toetrandro ara-kontinanta manjaka dia manjaka (miaraka amin'ny fihenan'ny mari-pana avo lenta).
Ny an'i Azia dia asongadina amin'ny taham-pahavitran'ny isan-taona avo lenta isan-taona (ihany no ambony noho i Azia ao amin'ity fambara ity). Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, nilatsaka ireo tahan'ny ireo ary mahatratra 1,3 isan-jato ankehitriny. Maherin'ny 60 isan-jaton'ny mponina eran-tany izao no mipetraka ao amin'ny kaontinanta Azia. Miara-mitentina 40 isan-jaton'ny mpon'izao tontolo izao i Shina sy India. Maherin'ny 7 ny olona mipetraka any amin'ny firenena 100 any Azia (afa-tsy ny roa etsy ambony, Pakistan, Indonesia, Japan, Philippines, ary Bangladesh koa no mihatra.)
Azia no misy ny solontenan'ny karazan'olombelona lehibe telo - Mongoloid (ny be indrindra ao amin'ny kaontinanta), Kaokazy ary Negroid. Samy hafa be ny firafitry ny foko.
Azia no ivon'ny sivilizasiôna maro taloha: indianina, sinoa, babylonianina sns. Any Azia atsimo, noho ny toe-java-misy mahomby amin'ny fambolena, dia olona maro no nitsangana velona mandraka ankehitriny.
Araka ny vinavina dia hitombo mandritra ny fotoana maharitra ny mponina aziatika, izay hitondra entana be loatra amin'ny loharanon-kontinenta. Araka ny tombantombana maoderina dia hitombo hatrany izany isaky ny firenena Aziatika, ankoatra an'i Kazakhstan sy Japon, hatramin'ny 2050 farafaharatsiny, mandritra io vanim-potoana io, hitombo avo roa heny amin'ny firenena maromaro ny mponina, indrindra ao Nepal, Pakistan ary Afghanistan.
Ny kolontsaina any Azia dia misy fahasamihafana lehibe amin'ny Eropa. Voalohany indrindra, misy karazana karazany maro izy ireo. Ny kolontsaina eropeana dia kolontsaina tandrefana miorina amin'ny Kristianisma niteraka ny sivilizasiôna eropeana maoderina, raha ny kolontsaina aziatika dia fitambarana kolontsaina samihafa misy eto amin'ity kaontinanta ity.
Tany Azia, ny kolontsaina maromaro nifototra tamin'ny fivavahana samy hafa dia nipoitra. Ny ivon'ny kolontsaina ara-kolotsaina lehibe:
Ny Moyen Orient dia toerana namoronana ny kolontsaina Silamo. Saika manjaka ny ankamaroan'ny Azia Andrefana sy Afovoany ankehitriny ny Silamo.
Azia Atsinanana - ny ivon'ny kolontsaina mandritra ny an'arivony taona maro eto dia i Shina, izay ielezan'ny Confucianisme. Nisy fiatraikany lehibe tamin'ny kolotsaina Korea, Vietnam, Japon.
Azia atsimo no ivon'ny kolontsaina Indiana mifototra amin'ny Hindoisma.
Azia atsimo atsinanana no ivon'ny kolontsaina bodista (anisan'izany i Thailand, Burma, Laos, Sri Lanka, Kambodza).
Misy ihany koa ny kolontsaina Malay-Islamika any amin'ny faritra atsimo-atsinanana (Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei) ary ny kolotsaina Indo-Islamika any amin'ny faritra atsimon'i Azia (Pakistan, Bangladesh, Maldives), izay mampiavaka ny fifangaroan'ny fivavahana silamo miaraka amin'ny lovantsofina ao an-toerana.
Endri-kolontsain'ny olona ao Azia:
Ny fihetsika manaja olona be taona dia fomban-drazana iray notehirizina hatramin'ny vanim-potoanan'ny rafi-poko.
Mikatsaka fahefana matanjaka (ny ankamaroan'ny fanjakana aziatika dia monarchie na fanjakana manana demaokrasia tsy misy fampandrosoana sy mpitondra karismatika).
Fanajana lehibe ho an'ny kolontsain'izy ireo.
Ny tsy fitoviana manan-danja eo amin'ny tontolon'ny Aziatika sy ny eropeana dia ao anatin'ny faniriana ny kolontsaina asiana ho fijerena tontolo mirindra sy mirindra, fa ny kolontsaina tandrefana dia manondro ny fiheverana an'izao tontolo izao ho toy ny andian-dàlana mifanohitra.